Xalka Dhibaatooyinka Maqalka ee Gigabyte GA-H61M-DS2 Motherboard | Laga soo bilaabo Linux
Hadaad isticmaale tahay Debian 7 oo aad dhibaato ku qabtid maqalka sabuuradda Gigabyte GA-H61M-DS2 ama la mid ah tani waa xalka.
Tani waxay ku habboon tahay jajabyada:
Intel Corporation 6 Taxanaha / C200 Taxanaha Chipset Qeexida Sare ee Maamulaha Maqalka Qoyska (rev 05)
Intel 7 Taxanaha / C210 Taxanaha Qoyska Qeexida Sare Maamulaha Codka
Haddii aad rabto inaad aragto moodello kale iyo qaabeyn suurtagal ah, waxaad ka heli kartaa xiriiriyahan gudaha Golaha SolydXK.
Kadibna waxaan dib u habeyn ku sameynaa feylka /etc/modprobe.d/alsa-base.conf oo aan bedelnaa waxa ay ku qoran tahay:
Waxaan dib u bilaabiay waana taas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Cilad bixinta Dhibaatooyinka Maqalka ee Gigabyte GA-H61M-DS2 Motherboard
Dhibaatooyinka noocan ah awgood, Linux weli diyaar uma ahan sidii nidaam hawlgal oo loogu talagalay desktop-ka.
Ma rumaysan tahay?
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax badan oo ka mid ah qalab horay loo rakibay. Windows badanaa wuxuu ku yimaadaa horay loo sii rakibay iyadoo la rakibayo dhamaan qalabka lagu qaabeeyey laguna taageeray kombiyuutarada la iibinayo. Sidoo kale waad ku sameyn kartaa Linux, laakiin suuqyada ayaa aad uga hooseeya, badanaa waxay dhacdaa inaad soo iibsato kumbuyuutar ay ku jirto Windows horay loo sii rakibay adigoon hubin in qalabka ay ku siin doonaan dhibaatooyin Linux iyo waxa dhaca.
Haddii aad iibsato PC-yada aan Windows-ka horay loo sii rakibin adigoon eegin iswaafajinta, waxaad arki lahayd dhibaatooyin isku mid ah oo aan si fudud loo xallin.
Xaqiiqdii, markii aan in muddo ah ka shaqeynayay dukaan ayay noo keeneen kombuyuutar ay soo iibsadeen iyaga oo aan ku rakibneyn OS-ka uu W7 rakibay iyo bluetooth-ga oo aan shaqeyn. Oo haddaan si sax ah u xasuusto, ma jirin hab lagu rakibo wadayaasha.
Hadday xitaa intel, oo aragti ahaan sii deyneysa koodhka ilaha, ay dhibaatooyin bixiso, xir oo aan iska tagno. Laakiin si kastaba xaalku ha ahaadee, cilladaha qalabka ayaa sidoo kale saameyn ku leh daaqadaha xaalado badan xalalkooduna ma jiraan ama xitaa way ka sii adag yihiin
In Windows, haddii wadayaasha guud ee Xalka Wadista Darawalka ha shaqeyn, waxaa lagugu qasbay inaad ka soo dejiso darawalada Intel laftiisa iyo / ama bogga soo saaraha sabuuqa.
Ma awoodi kari waayey inaan daaqadaha 2005 ku rakibo kombuyuutar laga soo bilaabo 8, maxaa yeelay darawalka maqalka waxaa loogu talagalay daaqadaha vista iyo 8da, uma muuqato inuu sameynayo buuq xanaaqa .., tani kuma dhacdo linux
Sida iska cad, Windows Vista wadayaasha ayaa la isticmaalaa maxaa yeelay ilaa Windows 8.1 waxay isticmaashaa NT 6 kernel.
waxba kuma laha lafaha, maqalka tooska ah wuxuu leeyahay xoogaa isbeddello muhiim ah, taas oo ka dhigaysa daaqadaha darawallada vista inaysan si fiican u shaqeyn, ugu yaraan waa inay noqdaan daaqadaha 7 ..
Waxay ahayd inay noqoto Microsoft.
Sikastaba, taas iyo sababo kale oo badan, waxaan kasoo horjeedaa Windows 8 (iyo 7 sidoo kale, inkasta oo kani uusan aheyn kumbuyuutarkeyga).
Aniguba isku fikir baan ahay. Waan ogahay in wax walba lagu xalin karo iyadoo la sameeyo cilmi baaris yar, laakiin loogu talagalay dadka isticmaala kaliya ee doonaya inay isticmaalaan nidaamka qalliinka iyaga oo aan u baahnayn x ama y haddii ay tahay wax dhib leh. Waan ogahay dhammaantood nidaamyada hawlgalka Waxay leeyihiin cillado ama faahfaahin, laakiin dadka isticmaala gudaha waxay kaliya doonayaan inay adeegsadaan qalabka oo hadda hehehehe, kuwa annaga naga mid ah ee jecel in cilad la saxo waa wax aad u wanaagsan hahaha laakiin qof walba isku si uma fikiro.
Haye ragga .. maxaad ugu arki weyday sidan?
Waxay leeyihiin Windows. Iyaga ayaa badalaya Motherboard-kaaga. Haddii aysan haysan darawalada, waxaa macquul ah in aysan yeelan karin dhawaq. Maxay qaban karaan? Waxba.
Waxay leeyihiin Windows. Iyaga ayaa badalaya Motherboard-kaaga. Codku wuu shaqeeyaa, miyaanay ahayn? Waxay wax ka beddelaan feyl. Wali waxay haystaan ​​maqal
Waxaad rabtay inaad dhahdo:
Leh Linux. Iyaga ayaa badalaya Motherboard-kaaga. Codku wuu shaqeeyaa, miyaanay ahayn? Waxay wax ka beddelaan feyl. Wali waxay haystaan ​​maqal
haha waxba kuma laha Linux, waayo iyagu waxay iibsadaan gigabyte way cadahay, wuxuu yidhi gigabyte waxay u adeegsadaan windows OS, qalabkoodana ugu adeegaan, mid fudud, midka iibsada isagoon wax waydiin, waan ka xumahay inay dhibaatooyin jiraan, waxaan dhigay link si ay u ogaadaan:
Uma qalmaan in dinaar lagu bixiyo.
Taasi wax shaqo kuma laha dhibaatada @Elav uu ka hadlayo. Sidoo kale, dhibaatada dhabta ah waxay noqoneysaa haddii ay la timaado kabo aamin ah, taas oo noqon doonta dhibaato dhab ah oo la xaliyo.
Hadda, waxa maqaalku tilmaamayo ayaa ah xalka kaliya ee qaladka qaabeynta darawalada Intel Debian markii aad rakibineyso alwaaxyada Gigabyte. Madax xanuun ayey noqon laheyd hadii uu ahaan lahaa kumbuyuutarka weyn ee Foxconn.
Waxay muujineysaa inaadan fahmin waxa aan ula jeeday, Gigabyte horeyba dhibaatooyin ayuu u qabay wuxuuna leeyahay maya taageerada Linux, waxaa fiican inaadan iibsan. Xiriirinta aan dhigay waa inaan arko sida ay uga fikiraan isticmaaleyaasha adeegsada Linux, si fudud ayey kuu sheegaan, u isticmaalaan daaqadaha. By habka, si aad u nuqul-qoraaga, ixtiraam badan iyada oo aan loo eegin inta weedha cinwaanku yahay.
Isla waxaas ayaa igu dhacay aniga oo saaran guddi Gigabyte ah oo aan kan ahayn, waxaan ku xaliyay anigoo tirtiray pulseaudio isla markaana soo ururiyey wadayaasha alsa. Tallaabooyinku waxay ahaayeen kuwan -> http://kikefree.wordpress.com/2013/08/03/solucionar-problema-de-sonido-en-debian-7-wheezy/